Mabasa okurima osimudzirwa
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Mabasa okurima osimudzirwa
By Muchaneta Chimuka on	 July 20, 2018 · NHAU DZEVARIMI
KAMBANI inoona nezvekurima yeCorteva Agriscience – iyo inoshanda iri pasi peDowDupont Agricultural Division – yosimudzira nyaya dzekurima muZimbabwe kuburikidza nekushanda nemakambani anouchika mbeu akadai sePioneer nePanner kuti agadzire mbeu dzemhando yepamusoro.Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau uye vamwe vatsigiri muHarare, VaPrabdeep Bajwa vanova commercial unit director kuCorteva vachimirira dunhu reAfrica Middle East vanoti donzvo ravo nderekuona kuti zvirimwa zvachengetedzwa uye zvichiwana misika mikuru.
“Mugore ra2007, Dupont neThe Dow Chemical Company zvakaita chibvumirano chemushandirapamwe vakaumba DowDupoint chinangwa chiri chekusimudzira kurima kune pundutso muZimbabwe. Corteva iri pamberi munyaya dzekugadzira mbeu dzemhando yepamusoro pamwe nekuchengetedzwa kwezvirimwa pasi rose. Zita redu idzva richaona veruzhinji vachiwaniswa chikafu chemhando yepamusoro,” vanodaro.
Vanoti Corteva inozivikanwa mukusimudzira mbeu dzinogadzirwa nekambani yePioneer nePanner muZimbabwe.
“Munyaya dzekuchengetedzwa kwezvirimwa, tine mishonga yakasiyana inorwisa makonye, sora netwumbuyu zvakadai seFall Army Worm, Tuta Absolta, mhashu nezvimwe. Tine mabhindauko matsva ayo achaona varimi vachipunduka mukurima kwavo,” vanodaro.
VaBajwa vanoti kambani yavo iri kutsigira zvakare nyaya dzeongororo muZimbabwe nedonzvo rekusimudzira mabasa ekurima.
Kambani iyi iri kuita mabhindauko ekurima kunzvimbo dzinosanganisira Juru Growth Point kwaMurehwa.